Abafundi bezeMfundo (kusukela kwesobunxele) nguMnu Luthando Molefe, uNks Jennifer Sheokarah, uNks Lungelo Mdluli, noNks Caitlin Govender.
Abafundi abane bezeMfundo bethule inkulumo kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe ye-Service-Learning Forum, ebihlelwe yi-Municipal Institue of Learning (i-MILE) kaMasipala waseThekwini ngaphansi kwesihloko esithi: Service-Learning for Social Transformation.
Uthisha osemnkantshubomvu noMholi wezeziFundo, uDkt Angela James ubewumeluleki wesethulo se-Community Engagement eSikoleni sezeMfundo.
UMnu Luthando Molefe, umfundi we-Onazi kwezeMfundo (eziFundweni zokuThuthukisa oThisha), uthe i-Service-Learning iwuhlelo lokufunda nokufundisa oluhlanganise ukusebenzela umphakathi nokufundiswa nokubonisa ukuze kuthuthukiswe ulwazi lokufunda, ukufundisa ukusebenzela umphakathi nokusimamisa imiphakathi.
‘Ubuhle be-Service-Learning wukuthi inikeza abafundi amandla okukwazi ukwenza izinto abazifunde ekilasini, ibe ibasiza ukuthi bathuthukise amakhono okuphilisana nabanye abantu njengokwenza ingosi yokukwazi ukusebenzisana nokuthola amakhono obuholi. Ngokwemfundo, yenza abafundi bakwazi ukucabanga bajule, bakhule ngokomqondo, bakwazi ukuxazulula izinkinga nokuthatha izinqumo,’ kusho yena.
UNks Jennifer Sheokarah, umfundi owenza iziqu zobudokotela (kwezeMfundo zoLimi lwesiNgisi), uthe: 'I-Service-Learning ididiyela izinto ezimbili okungukuCwaninga/ukuFunda nokuba wusizo emphakathini. Ngikholwa wukuthi kumqoka kakhulu ukuhlanganisa lezi zinto zombili njengoba zingagcini nje ngokukhulisa umuntu kepha futhi zikhulisa nabanye; kuhlomule wonke umuntu ngaleyo ndlela.’
Uthe ‘izinto ze-Servce-Learning ziyingxenye yezifundo zobudokotela engizenzayo, lapho ngihlomisa khona abafundi babaNtu ukusebenzisa izindlela ezintsha zokufundisa nezokufunda’.
UNks Lungelo Mdluli, umfundi we-Bachelor of Education, ukhulume ngokuthi i-Service-Learning isho ukuthini kothisha. ‘Othisha nabafundi isikhathi esiningi bahlala ndawonye ngesikhathi sesikole. Kodwa indlela othisha abaqonda ngayo ubudlelwano babo nabafundi nozakwabo yenziwa yisilabhasi ehleliwe. Sincane isikhathi sokuba nezingxoxo ngezinto ezenzeka emphakathini,’ kusho yena.
‘Nge-Service-Learning izifundiswa ziba ngumzimba owodwa osebenzisa indlela ehlelekile yokumba izindaba ezifihlekile kodwa ezivundululekayo ngesikhathi se-Service-Learning, lapho abantu bekhuluma iqiniso ngezinto asebeke bazibona noma zabehlela.’
Umfundi we-Onazi kwezeMfundo, uNks Caitlin Govender uxoxe ngomlando wakhe. ‘Ngenkathi ngithola umsebenzi, ngangivama ukwenza izinto ezinhle, ngibuye ngiqhube nempilo yami, ngangingawazi umsebenzi wami emphakathini kanti ngicabanga ukuthi loko kuyabakhathaza abafundi. Umbuzo okufanele siwubuzele abafundi bethu uthi ingabe bazoba naliphi iqhaza emiphakathini yangakubo ngomuso? Bangakwenzeli amamaki nje loku kuphela noma umsebenzi wabo wansuku zonke. Ukuzibuza uziphendule ngenye yezindlela ezimqoka zokushintsha ngoba ngale ngokubheka emuva, uzibuze uziphendule, kuba yimibuzo engatheni noma imicabango.'